Odawaa “Ahlusuna Miiska Wada hadalka ha yimaadaan, waa dhamaatay waqtigii Qoriga” | shumis.net
Home » News » Odawaa “Ahlusuna Miiska Wada hadalka ha yimaadaan, waa dhamaatay waqtigii Qoriga”
Odawaa “Ahlusuna Miiska Wada hadalka ha yimaadaan, waa dhamaatay waqtigii Qoriga”
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka C/raxmaan Maxamed Xuseen Odawaa oo shalay gaaray degmada Hobyo ee Gobolka Mudug ayaa ugu baaqay Culumaa’udiinka Ahlusuna inay Nabada qaataan, oo ay yimaadaan Miiska wada hadalka.
Wasiir Odawaa ayaa ka codsaday Madaxweynaha Galmudug inuu culeyska saaro xalinta khilaafaadka, isla markaana Ururka Ahlusuna ee fadhigoodu yahay Dhuusa Mareeb inuu wada hadal la galo.
Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay inay dhamaatay waqtigii qoriga wax lagu raadinayay, isagoo ugu baaqay Culumaa’udiinka Ahlusuna wax kasta oo ay tabanayaan ku raadiyaan wada hadal.
“Waa dhamaatay waqtigii nin qori leh uu meel ku heysanayay, kooxda joogta Dhuusa Mareeb waxaa leenahay qori waqtigii waa dhamaaday, waxaa soo haray qori is qarxinaya, kaas ayaa la rabaa in dalka laga qabto ee garab ha u noqonina, wixii aad tabaneysaan wada hadal ku raadiya, caqliga ha shaqeeyo”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Gudaha.
Wada hadalo u dhaxeeya Maamulka Galmudug iyo Ahlusuna ayaa lagu wadaa inuu dhowaan bilowdo Gobolka Galgaduud.
Title: Odawaa “Ahlusuna Miiska Wada hadalka ha yimaadaan, waa dhamaatay waqtigii Qoriga”